Akụkọ - GlassTec - Nsogbu Ọhụrụ
Glasstec VIRTUAL site na 20 ruo 22 Ọktọba ejirila ihe ịga nke ọma gbochie ọdịiche dị n'etiti ugbu a na nke glasstec na-abịanụ na June 2021. Site n'echiche ya nke gụnyere ịnyefe ihe ọmụma dijitalụ, ohere ngosi ọhụụ maka ndị ngosi yana nhọrọ ntanetị ndị ọzọ mejupụtara, o kwenyela na mpaghara iko mba ụwa. .
“Site na pọtụfoliyo mebere glasstec bụ Messe Düsseldorf na-egosi na ọ ga-aga nke ọma n’ijikọta ụlọ ọrụ n’ ụwa niile, ọ bụghị naanị n’ihe anụ ahụ na kamakwa usoro dijitalụ. Nke a pụtara na ọ na-aga n'ihu ịkwado onwe ya ọzọ dị ka nọmba 1 maka ndị na-ahụ maka azụmahịa na kọntaktị azụmahịa, "ka Erhard Wienkamp kwuru, COO Messe Düsseldorf.
“Ọrịa zuru ụwa ọnụ bụ nnukwu ihe ịma aka nye ụlọ ọrụ iko ma sikwa otú ahụ maka igwe na ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na mpaghara a. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa na Messe Düsseldorf nyere anyị ụdị ọhụụ "glasstec VIRTUAL" iji nwee ike ibupụta ngwaahịa ọhụrụ anyị n'oge ndị a. Dị iche na glasstec nkịtị, mana akara ngosi dị mkpa ma doo anya maka ụlọ ọrụ ahụ. Obi dị anyị ụtọ iji ohere nke mmemme ogbako sara mbara na ohere iji gosipụta ọhụụ ọhụụ na ihe ọhụụ site na nnọkọ weebụ na ọwa nke aka anyị, anyị natakwara nzaghachi ziri ezi. Ka o sina dị, anyị na-atụ anya izute ọzọ n'onwe anyị na glasstec na Düsseldorf na June 2021, "Egbert Wenninger, Onye isi oche Onye isi oche Business Unit Glass, Grenzebach Maschinenbau GmbH na Onye isi oche nke ụlọ ọrụ ndụmọdụ glasstec.
“N’oge ọrịa a na-efe efe, ihe ngwọta a nyere anyị aka ịnye ụlọ ọrụ mgbakwunye ihe ọzọ iji mekwuo ma gbasaa kọntaktị mba ụwa. Ugbu a elekwasịrị anya kpamkpam na ịkwadebe glasstec, nke a ga-eme ebe a na Düsseldorf site na 15 ruo 18 June 2021, ”Birgit Horn kwuru, Onye isi ọrụ glasstec.
Ihe ngosi 120,000 gosipụtara nke ọma nnukwu mmasị ndị obodo iko nwere na ọdịnaya nke glasstec VIRTUAL. N'ebe ngosi ihe ngosi, ndị ngosi 800 sitere na mba 44 gosipụtara ngwaahịa ha, ngwọta na ngwa ha. Ihe karịrị mmadụ 5,000 sonyere na usoro mmekọrịta ahụ. All web sessions na ogbako egwu ga-adị n'oge na-achọ. Showlọ ihe ngosi nke ndị na-egosi ihe ngosi ga-adịkwa ndị ọbịa ruo mgbe glasstec na June 2021.